अभिमत: जनसंख्या राज्यमन्त्रीका ९ छोराछोरी :अर्को जन्माइदिऊँ ?
जनसंख्या राज्यमन्त्रीका ९ छोराछोरी :अर्को जन्माइदिऊँ ?
श्रीमति मनसरा बस्याल म भर्खरै १४ वर्षकी थिएँ, उहाँ -खड्गबहादुर बस्याल) सँग माया बस्यो । उहाँ -सुर्खेतको) गोठीकाडाबाट यहाँ -वीरेन्द्रनगर) पढ्न आउनुहुन्थ्यो, म गाई लिएर गोठालो जान्थेँ । पहिले चिनजान भयो, पछि माया बस्यो ।
तस्बिरः श्रीधर पौडेल/नयाँ पत्रिका